စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့အဲဒါဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပဲ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး ။ သူတို့ကိုဖန်တီးပြီးပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ပဲ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄% ကိုသာပြောင်းလဲလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ c-level အမှုဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မပျော်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုဘတ်ဂျက်မသုံးလိုကြပါ။ ဒီစာရင်းဇယားတွေရှိနေပေမယ့်ဒါကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
ယနေ့ဒီဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ၏ခြုံငုံပြproblemနာသည်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အစဉ်အလာအရ၊ သူတို့ဟာခေတ်သစ်မှာမဟုတ်ရင်တောင်မှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များနဲ့အရောင်းအစီအစဉ်များဟာတိုက်ဆိုင်နေပြီးပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သို့မှသာလက်ချင်းချိတ်ဆက်မှုဟာအဆင်ပြေချောမွေ့ပြီးအချိန်မီဖြစ်လိမ့်မည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ဤသို့ပြုရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်အသစ်များသည် ဦး ဆောင်သူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုစျေးကွက်တင်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်စနစ်ထဲသို့ဖြည့်စွက်သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်အလိုအလျောက်စနစ်သည်ဖောက်သည်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုဖန်တီးပြီးခြေရာခံသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်အလားအလာကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် ဦး ဆောင်မှုအသစ်များကိုပိတ်ပစ်ရန်အတွက်အောင်မြင်သောလမ်းပြမြေပုံဖြစ်သည့်အတွက်သေချာသည်။
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသောပြissueနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်အကြားချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း (ကျွန်ုပ်၏ကမ္ဘာတွင်) သည်မက်ထရစ်နှင့် ROI (ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးကိုအမြဲသက်သေပြရန်လိုအပ်သည့်ထုတ်ကုန်) အကြောင်းဖြစ်သည်။ ရောင်းအားမှာတစ် ဦး တည်းသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုစိုးရိမ်ပြီး client တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ကြိမ်တွင်ပိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်မှုသည်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်စဉ်ကိုလုံးလုံးလျားလျားခြေရာခံရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တင်ပြသောရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေနိုင်သည်။ သို့သော်အမှန်တကယ် ၀ င်ငွေကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်အရောင်း ၀ န်ထမ်းများအပေါ်မှီခိုအားထားရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်း (အများအားဖြင့်အလွန်မြင့်မားသောအခကြေးငွေဝန်ဆောင်မှုများ) တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ဆောင်မှုသည်ရာနှင့်ချီသောထိတွေ့မှုမှလာနိုင်ပြီးအမှန်တကယ်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆို ROI ကိုချို့ယွင်းစေခြင်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်။
မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Tyler! ကွဲပြားခြားနားသော ဦး စားပေးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ အဲဒါအရမ်းမှန်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ငါထင်တယ်၊ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများသည်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်မှုများအားဖြင့်တူညီသောရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည်ကိုလုပ်ဆောင်သည်ကိုသဘောပေါက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည် (အကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်သိမ်းနိုင်သည်!) ။
ROI သွားသည်နှင့်အမျှရောင်းအားသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတစ်ခုလုံးအတွက် ROI ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်ဟုကျွန်တော်အမြဲထင်ခဲ့သည်။ သူတို့လုပ်သည့်“ စျေးနှုန်း” မရသည့်လုပ်ဆောင်မှုများရှိပါသည်။ သေချာတာပေါ့၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ကကော်ဖီသောက်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာကြောင့်သူတို့ကနှိပ်လိုက်တာပဲ။ အဲဒီကုမ္ပဏီကသူတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ချင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သို့သော်နှစ်လအကြာအခြားအတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပအချက်များကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်းမဖြစ်ခဲ့ပါ။ “ ထိတွေ့မှုအမျိုးမျိုး” ရှိသောကမ္ဘာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်သက်ရောက်မှုကိုမည်သည့်အချိန်၌ပြုလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုများတွင် ROI ရှိသင့်သနည်း။ ဒါဟာအားလုံးအလွန်မရေနှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲပါတယ်။
ငါသဘောတူတယ် ကိုင်တွယ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ကျနော့်ချဉ်းကပ်မှုကအခြေခံအားဖြင့်သင့်ရဲ့ထိပ်ဆုံးကနေစာရင်းအင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုရန်နှင့်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများသည်သင့်အတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ၊ သင်၏ဆိုဒ်တွင်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာ၏ ၂% သည်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်တောင်းဆိုချက်ကိုတင်ပြသည်ဆိုလျှင်၊ ၂%၊ ၃၀% သည်နောက်ဆုံးတွင်အရောင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးထိုရောင်းအားသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်ဟုသင်ဆိုလျှင်၊ သင်ထုတ်လုပ်သည့်အော်ဂဲနစ် visit ည့်သည်အသစ်၏တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းပါ - ၎င်းသည်သင်၏ SEO / သင်၏အားထုတ်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိသော ROI တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိတွေ့မှုအမျိုးမျိုးကရှုပ်ထွေးတာသင်မှန်ပါတယ် အိုး - ငါ့ကိုယုံပါ - ငါအကြောင်းအားလုံးသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တယ်၊ ငါတို့အနည်းဆုံးခန့်မှန်းတိုင်းတာမှုတွေလုပ်ရမယ်၊ ငါတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ငါတို့ရဲ့ဒေါ်လာကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်၊ (ဥပမာ - SEO တွင်အလုပ်လုပ်ရန်တစ်လလျှင် ၁၀ နာရီပိုသုံးသင့်သလား။ ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြန်တွက်ချက်ကြည့်ရအောင်) ။
ဂရိတ်အချက်များ, Tyler ။ မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Twitter ပေါ်တွင်သင်နောက်သို့လိုက်ခဲ့သည် ပိုပြီးကြားနာဖို့မျှော်လင့်။